कांग्रेसकाे महाधिवेशन सर्ने निश्चित, अब कहिले हाेला त महाधिवेशन ? - Ratopress::रातो प्रेस
कांग्रेसकाे महाधिवेशन सर्ने निश्चित, अब कहिले हाेला त महाधिवेशन ?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सर्ने निश्चित भएको छ । सो सम्बन्धमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफलपछि टुंगो लाग्नेछ । कांग्रेसले पार्टीको सबैभन्दा तल्लो तहको संरचना मानिएको वडा तहको अधिवेशन यही १२ साउनबाट सुरु गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको थियो । सो कार्यतालिका प्रभावित हुने निश्चित भइसकेको छ ।
शितगंगा -६ मा नेकपा एमालेको अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न
कुनै हालतमा एमसीसी पास हुन नदिने विप्लवकाे भनाइ
नेकपा (एस) मा समाहित भयो नेकपा एमाले अर्घाखाँची काठमाडौँ मञ्च